Bangenelela odabeni lwamaciko angeneme
UMLINGISI osathuthuka uKeke Mphuthi uthi wacishe waphuphunyelwa yisisu ngenxa yokungasebenzi kahle nabakwa-Ferguson emidlalweni yabo eyahlukene
NOKUBONGWA PHENYANE | October 10, 2019
INKAMPANI iMultichoice, eneziteshi ezahlukene okukhona kuzo uMzansi Magic, isiveze ukuthi izohlangana nabakwaFerguson, ukudingida udaba lwamaciko angajabule.
Lokhu kulandela incwadi evulelekile ebhalwe wuqweqwe lomlingisi uVatiswa Ndara ekhala ngokuthi inkampani yalaba abashadile ixhaphaza amaciko ngokuwanika imali encane.
Izolo bekufanele kuqale ukuqoshwa kwesizini yesithathu yomdlalo Igazi kodwa lo mlingisi waveza ukuthi ngeke esayilingisa indawo kaNomaRashiya.
Uthe imali abavumelane ngayo akubanga yile akade eyifuna.
Ukhale ngokuthi wayefune uR700 000 kodwa bathi bazomnika uR110 000.
UJoe Heshu wakwaMultichoice, uthe bazolusukumela lolu daba njengoba beyibonile nencwadi kaVatiswa ayibhalele uNgqongqoshe wamaSiko namaCiko kuzwelonke, uMnuz Nathi Mthethwa, ekhala ngokuthi basukume balwele amaciko bewuhulumeni.
“Njengenhlangano yokusakaza ehamba phambili e-Afrika nethandwayo ekuxoxeni izindaba ezehlukene isebenzisa imidlalo, sibamba iqhaza elikhulu ekuthuthukiseni ithalente ukuze umkhakha wobuciko ube nekusasa eliqhakazile. Ngale ndlela sihlale sikhuthaza abakhiqizi bemidlalo ukuthi benze ubulungiswa ezinkontilekeni abazinikeza laba abasebenza nabo. Sizohlangana nabathintekayo ukudingida lolu daba,” kusho uJoe.
AbakwaFerguson abafunanga ukuphawula ngalezi zinsongo kodwa ummeli wabo uBrendon de Kooker, ekhuluma nozakwabo wephephandaba Isolezwe, iThe Star, uthe basezinhlelweni zokuthathela lo mlingisi izinyathelo zomthetho.
“Izinsolo ezenziwe kule ncwadi ngalaba abashadile zingamanga futhi zisakazwe ngenhloso yokudala umonakalo kubona,” kusho uDe Kooker.
Uthe izinyathelo zomthetho yizona ababona kungcono bazithathe manje futhi abakwaFerguson ngeke kuze kube khona mibuzo abazoyiphendula ngalolu daba.
Yize uVatiswa kunguye kuphela ophumele obala ngoMsombuluko ngalolu daba kodwa nabanye abalingisi abake basebenza nabakwaFerguson baveze ukungenami ngendlela ababaphatha ngayo.
UKeke Mphuti, owayelingisa emdlalweni iThe Throne ne-Unmarried, uveze ukuthi wacishe waphuphunyelwa yisisu ekhulelwe njengoba engaphathekanga kahle esebenza kule nkampani.
“Ngesikhathi kuvela ukuthi ngikhulelwe bangitshela ukuthi umsebenzi wami ngeke uphazamiseke, kuzothi uma sengibelethile ngihlale amasonto ayisithupha bese ngibuyela emsebenzini. Kodwa omunye wabasebenzi wathi inkontileka yami inqanyuliwe,” kubhala uKeke kuTwitter.
U-Anga Makubalo noTalitha Ndima baveze ukuthi nabo ngeke besasebenza nale nkampani futhi ngeke bawuqophe umdlalo Igazi.